မြန်မာပြည်က ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းနဲ့ ဟိုတယ်များ - LODGGY
မြန်မာပြည်က ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းနဲ့ ဟိုတယ်များ
ခရီးသွားရတာ၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ရတာ ဝါသနာပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်
ဒီတစ်ခါတော့ မြန်မာပြည်တွင်းကထူးထူးခြားခြားလေး ဆောက်ထားတဲ့ဟိုတယ်လေးတွေပြောပြမယ်နော်။
ဘယ်ဟိုတယ်လေးတွေဖြစ်မလဲ? ဘယ်ဟိုတယ်လေးတွေကော တည်းဖူးကြလဲ?
အခုနောက်ပိုင်း ခေတ်စားနေတဲ့ Tiny House အိမ်ပုံစံလေးတွေကိုဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ပြင်ဦးလွင်ရဲ့ ပထမဆုံး Tiny House လေးပါ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အရောင်စုံအိမ်သေးသေးလေးတွေထဲမှာမှ အိပ်ခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ ဧည့်ခန်းတွေကို ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ အိမ်လေးတွေနဲ့ကော၊ အိမ်အထဲမှာပါ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့အရမ်းလှပါတယ်။ မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းလေးပေါ်က ခုံလှလှလေးတွေမှာထိုင်ပြီး အေးချမ်းလှပတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေးရဲ့ အလှတရားတွေနောက်ကို စီးမျောလို့ရပါတယ်။
Aung Mingalar Island & Floating Hotel (ချောင်းသာ)
ချောင်းသာရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ရေပေါ်ဟိုတယ်ပါ။ ဖိုးကုလားကျွန်းပေါ်မှာ ရှိပြီး သင်္ဘောပေါ်မှာဆောက်ထားတဲ့ Aung Mingalar Floating Hotel ရယ်၊ အောင်မင်္ဂလာကျွန်းဟိုတယ်ရယ်ဆိုပြီး ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ ပင်လယ်ကြီးက ကိုယ်အခန်းဘေး၊ အိပ်ယာဘေးမှာပဲဆိုတော့ တခြားကမ်းခြေဟိုတယ်တွေနဲ့မတူပဲ ညဆိုရင် ပင်လယ်လှိုင်းလေးတွေက ချော့သိပ်နေသလို ခံစားမိစေမှာပါ။
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမှာ ရှိပြီး luxury ပုံစံပါ။ သူ့မှာ ကရင်ရိုးရာ လုံးချင်း Bungalow တွေမှာတည်းလို့ရသလို သူ့မှာ sky dome ဆိုတဲ့ ရွက်ဖျင်တဲအိမ် ပုံစံ အခန်းအမျိုးအစားတခုပါဝင်တယ်။ ဘေးပတ်လည်ကိုမြင်ရတဲ့အပြင် ညဘက်ဆို ကြယ်တာရာကြီးတခုလုံးကို အခန်းထဲကပဲမြင်ရအောင်လုပ်ထားပါတယ်။
Bago Yoma Eco Rosort (ပြည်)
ပေါက်ခေါင်းအကျော် အုတ်တွင်းရိုးမဖြတ်လမ်းပေါ်မှာရှိပြီး Eco Resort ဆိုတဲ့အတိုင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို မပျက်စီးအောင် ထိန်းသိမ်းတည်ဆောက်ထားပြီး သစ်တွေအဓိက အသုံးပြု ဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။ သစ်ပင်၊ ဝါးပင်တွေ အုပ်အုပ်ဆိုင်းဆိုင်း ရှိနေမယ်၊ ဘန်ဂလိုအခန်းတွေဘေးမှာဆို စီးဆင်းနေတဲ့ စမ်းချောင်းလေး ရှိမယ်။ မနက်ဆို အခန်းထဲထိ လျှံကျလာမယ့် စမ်းချောင်းစီးသံ၊ ကျေးငှက်သံတွေနဲ့ တစ်ကယ်ပဲ အေးချမ်းပါတယ်။
The Cabins Ngwe Saung
ငွေဆောင်ကမ်းခြေမှာ ဘန်ဂလိုပုံစံနဲ့ ဟိုတယ်လေးတွေများတယ်ဆိုပေမယ့် The Cabins Ngwe Saung ကတော့ တမူထူးခြားပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံစံတူ Cabins လေးတွေ ၁၀ ခုနဲ့ ဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ရေကူးကန်လည်း ပါပါတယ်။ ငွေဆောင်ရွာနဲ့နီးပြီး ကမ်းခြေကပ်ရပ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ်းခြေကို ၅ မိနစ်လောက်တော့ လမ်းလျှောက်ရပါတယ်။
ကလောမှာ လှတဲ့ဟိုတယ်လေးတွေများတဲ့ထဲက Hillock Villa ကတော့ နည်းနည်းလေး ပိုဆန်းနေမှာပါ။ တောင်စောင်းလေးပေါ်မှာတည်ရှိတယ်။ ထင်းရှုးပင်လေးတွေ၊ ပန်းခြံလေးတွေနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတယ်။ အခန်းထဲမှာဆိုလည်း မီးလင်းဖိုလေးတွေနဲ့ အတွင်းရော အပြင်ရော အရမ်းလှတဲ့ ဟိုတယ်လေးပါ။
Song of Travel Hostel (ညောင်ရွှေ)
မြန်မာပြည်ရဲ့ပထမဆုံး ကက်ဆက်ပုံစံ အဆောက်အဦးကိုညွှန်မယ်ဆို Song of Travel Hostel ကိုသာပြလိုက်ပါ။ Backpacker တွေကို target ထားတဲ့နေရာမလို့ လူငယ်တွေအကြိုက် hostel လည်းဖြစ်တယ်။ activity တွေအနေနဲ့ ဇယ်ခုန်ဆော့မလား အနီးကကျောင်းမှာစာသင်မလား ညဘက်ဝိုင်းဖွဲ့ဂစ်တာတီးမလား လူငယ်ဆန်ဆန် ပေါ့ပေ့ါပါးပါး အားလုံး လုပ်လို့တဲ့ hostel လေးပါ။
St. John Hostel (ရန်ကုန်)
ဒီ Hostel မှာတည်းရင် ၂၁ ရာစုတောင်မဟုတ်ဘူး။ ၂၂ ရာစုလိုခံစားရမှာပါ။ သာမန် hostel တွေလို ၂ ထပ်ကုတင်တွေမဟုတ်ဘဲ တယောက်အတွက်သီးသန့် pod ပုံစံအိမ်ယာစင်တွေပါ။POD တခုစီမှာ သီးသန့်အခန်းဌားရင်ပါမယ့် စာကြည့်မီး၊ TV စတဲ့ facility တွေကို ဒီ POD ထဲမှာထည့်ထားပေးတယ်။
Vintage Luxury Yacht Hotel (ရန်ကုန်)
Luxury Cruise ကို သွားစီးမှ သင်္ဘောပေါ်မှာ အိပ်ခွင့်ရမဲ့ ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူးနော်။ ၁၉၂၀ Titanic သဘောင်္မှာစီးရသလိုခံစားရအောင် ခေတ်ဟောင်းပုံစံပရိဘောဂတွေရယ် Facility တွေရယ် ထည့်သုံးထားတယ်။
The Log (ဂေါ်ရန်ဂျီ)
ဂေါ်ရန်ဂျီကျွန်းပေါ်မှာ အမြင့်ပိုင်းကျောက်ဆောင်ပြင်ကျယ်ပေါ်မှာ ဆောက်ထားတဲ့ The Log Goyangyi ပါ။ အမြင့်ပိုင်းလေးပေါ်မှာ ဆောက်ထားတာဆိုတော့ ပင်လယ်ပြင်အလှကို အပေါ်စီးကနေ တမေ့တမော ခံစားလို့ရပါတယ်။ Log လေးတွေလည်း အများကြီး မရှိပဲ အဖွဲ့လိုက်သွားရင် ကိုယ်ပိုင်ကျွန်းလေးပေါ်မှာနေရသလိုပါပဲ။ The Log ကနေ ဘေးအောက်နားဆင်းလိုက်ရင်လည်း ကိုယ်ပိုင်ကမ်းခြေလေးလို့ ရေကူးလို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်။
Hotel Queen Jamadevi (မော်လမြိုင်)
မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်မှာ မွန်ရိုးရာအိမ်လေးတွေနဲ့ မြို့ပေါ်မှာလို့မထင်ရပဲ မွန်ရွာလေးထဲရောက်သွားရသလို ခံစားမှုမျိုးပေးတဲ့ ဟိုတယ်လေးပါ။ အခန်းနာမည်ကို မွန်မင်းသား၊ မင်းသမီးနာမည်လေးတွေပေးထားပြီး ဟိုတယ်အလယ်မှာဆိုလည်း ရာသီအလိုက် သီးနှံတွေစိုက်တဲ့စိုက်ခင်းလေးလည်းရှိပါတယ်။
ပုဂံမှာ ဟိုတယ်အများစုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ပုဂံဗိသုကာ လက်ရာကသွေဖယ်ပြီး ဟိုတယ်ဆောက်တာရှားပါတယ်။ ရှားရှားပါပါးဟိုတယ်တွေထဲက Eternal Lodge ကတော့ ကွန်တိန်နာလေးတွေနဲ့ထူးထူးခြားခြားဆောက်လုပ်ထားတာပါ။ တစ်ခန်းကို ကွန်တိန်နာ တစ်ခုစီနဲ့ စုစုပေါင်း Containers ၄၁ ခု/ ၄၁ ခန်းရှိပါတယ်။
Golden Gate Guesthouse (ပြင်ဦးလွင်)
ပြင်ဦးလွင် San Francisco Restaurant ကနေ တပိုင်တနိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ Golden Gate Guesthouse လေးပါ။ သူ့ရဲ့တမူထူးခြားချက်က Smurf ဇာတ်လမ်းထဲကအိမ်လေးတွေလို ချစ်စရာလုံးချင်းပုံစံတွေနဲ့ဆောက်ထားတာပါ။ သူ့မှာဆို ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ သစ်လုံးအိမ်၊ ရွှံ့အိမ်၊ ဝါးအိမ်ဆိုပြီး ပုံစံမျိုးစုံလေးတွေနဲ့တည်းလို့ရတယ်။
Pristine Lotus Resort (အင်းလေး)
အင်းလေးကန်ကြီးထဲမှာ သင်္ဘောတွေအစီအရီပုံစံဆောက်ထားတဲ့ floating cottage အခန်းကတွေက ပုံမှန် အင်းလေးရေပေါ် ဘန်ဂလိုပုံစံကနေ ခွဲထွက်နေတာတော့အမှန်ပဲ။ Resort ကို နှစ်ပိုင်းခွဲထားပါတယ်။ Garden ထဲက lotus villa နဲ့ အင်းလေးကန်ကြီးဘက်ခြမ်းမှာ တော့ floating cottage အခန်းတွေပါ။ Resort ကြီးတစ်ခုလုံးက တောတောင်ရိပ်နဲ့ ဆိုတော့ စိမ်းလမ်းစိုပြေပြီး အလွန်နားအေးပါးအေးရှိပါတယ်။
Awei Pila Resort – မြိတ်ကျွန်းစု
Awei Pila Resort က ကော့သောင်းမှ ၈၀ ကီလိုမီတာအကွာ အက်ဒမန်ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ Pila ကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ Resort တစ်ခုပါ။ Pila ကျွန်းက ကမ်းခြေတစ်လျောက် မီတာ ၆၀၀ ရှည်လျားပြီး ကျွန်းကို ကျောက်တောင်ကြီးတစ်ခု ကနှစ်ပိုင်းဖြတ် ထားပါတယ်။ Pila ကျွန်းရဲ့ အနီးတဝိုက်ကျွန်းတွေကတော့ Rocky Island နဲ့ Pulo Island တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Awei Pila Resort မှာတော့ အခန်းအမျိုးအစားတွေအနေနဲ့ Beach Front Sea View၊ Seaview (row2) ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။